Wararka Maanta: Jimco, July 27, 2018-Museveni oo mar kale isa soo sharixi kara
Garsoorayaasha ayaa xukumay in laalida da'da madaxweynenimo aysan meesha ka saareyn awoodii ay dadku u leeyihiin in ay aayahooda ka tashadaaan, sida uu qeexayo qodobka koowaad ee dastuurka dalkaasi.
Dhammaan garsoorayaasha ayaa ku garab istaagay baarlamaanka meel marinta sharcigan, maadaama baarlamaanku u codeeyeen in muddada xileedka madaxweynaha laga dhigo ilaa 7 sano.
Waxyaabaha muranka dhaliyay ayaa waxaa ka mid ah in meel marinta sharcigan ay kusoo beegmatay xili ay jireen rabhado, madaxbanaanida baarlamaankana ay qatar soo wajahday kaddib markii rag ku labisnaa dareyska ciidanka ay weerareen xarunta baarlamaanka.
Doodi ka dhalatay qaanuunkaan bishii disember ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa hareeyay rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay guud ahaan dalkaasi Uganda.
Garsoorayaashu waxa ay sheegeen in ciidamada iyo milatariga loo daaad gureeyay dhismaha baarlamaanka ay ahayd mid loo baahnaa, sababtoo ah ciidamada waxaa mas'uuliyad ay ka saarnaa inay ka jawaabaan xaaladaha degdega ah.
Maxkamadda ayaase ku tilmaantay inay ahayd geyru mas'uulnimo amarkii ay boolisku ku joojiyeen in xildhibbaanadu ay qabtaan isu soo baxyo si ay ugala tashadaan hindisa sharciyeedkaan codbixiyayaasha, taasi oo dhalisay rabshado ka dhacay tuulooyinka fog fog ee dalkaasi.
Dadka dhaliilaya isbadelkaan ayaa u arka tallaabadan inay tahay mid lagu doonayo inuu xukunka kusii hayo madaxweye Yoweri Museveni.
Madaxweyen Museveni ayaa haya tallada dalka Uganda muddo 32 sano ah, isla markaana sharciyan uma suuragaleyso inuu u tartamo doorashada 2021 hadii sharcigan xadidaada da'da madaxweynaha uu sii jiri lahaa.